Ndepụta Peeji nke Kachasị Mma | Martech Zone
Visual Weebụ Optimizer jiri data si n'elu 150 jiri ihe omumu iji wepụta akwụkwọ ozi a nke na-akọwapụta ihe ndị bụ isi na peeji nke ịga nke ọma na-aga nke ọma. Isi ihe nke infographic abụghị inye ndepụta maka mmecha; ọ bụ iji nye ndepụta nyocha maka nyocha na njikarịcha.
68% nke ndị ọbịa niile na-ere ahịa e-commerce hapụrụ chaatị ha ịzụ ahịa na 63% nke na $ 4 puku ijeri recoverable
Ihe omuma ahu na-agabiga site na ihe ano iji hazie akwukwo ndenye ego nke na-eme ka mgbanwe di iche iche:
Ọrụ ndenye ọpụpụ Page - okike okike, udiri ederede, nhọrọ ịkwụ ụgwọ, nhọrọ mbupu, nkwenye, na mbipụta akwụkwọ.
Ojiji ndenye ọpụpụ Page - nkwado akwụkwọ, ntuziaka doro anya, Ogwe ọganihu, nchịkọta, zere ihe ndọpụ uche ma nye usoro ezi uche dị na ya.
Nchebe Ibe Ọpụpụ - akara ngosi nkwado nke atọ, ụgwọ nkwado nchekwa, SSL, na asambodo nkwado agbakwunyere, na ozi kọntaktị.
Nhazi akwukwo ndenye ego - atụmatụ agba, nha onyonyo, ịdị mfe, ikpo oku na arụmọrụ, ngwaahịa ndị metụtara ya, ngwaahịa ndị akwadoro, na nhọrọ ngwaahịa.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ekwenyere m na ọ bụrụ na ịlele ụfọdụ saịtị saịtị e-commerce ndị kachasị ewu ewu, na ị ga-ahụ ụfọdụ nhazi na usoro ndị ama ama anwalela ma nyekwa ahụmịhe kachasị mma. VWO na-atụ aro ịnwale maka saịtị ọ bụla, n'agbanyeghị, dịka saịtị ọ bụla na-enye ahụmịhe ya dị iche.
Tags: leleeLeleepeeji ndenye ọpụpụndenye ọpụpụ page imewendenye ọpụpụ na peeji nkendenye ọpụpụ ibe ojijiechiche ucheakara nche